Indonesia: Badhasaablka Jakarta oo isagoo af-legaado diineed loo haysta hadana doorasho u taagan - BBC News Somali
Indonesia: Badhasaablka Jakarta oo isagoo af-legaado diineed loo haysta hadana doorasho u taagan
Image caption "Akok" weli taageero badan buu leeyahay walow dacwadi ku socoto
Dadka degan magaalo madaxda Indonesia ee Jakarta ayaa u dareeray cod bixin lagu dooranayo badhasaab cusub, doorashadaasna waxa hadheeyey dacwadda ku socota badhasaabka haatan oo lagu eedeeyay af-legaado diineed.
Basuki Tjahaja Purnama, oo lagu naanayso "Ahok" ayaa noqday masiixigii ugu horeeyey ee ka isirran qawmiyadda Shiinaha ah ee ku nool dalka aqlabiyaddiisu Muslimiinta yihiin ee markii ugu horayaysay qabta xilkaa muddo 50 sanadood ah.
Dacwad ayaa ku socota lagu soo eedeeyey inuu af-legaadeeyay Islaamka ka dib markii uu nin ay tartameey ku eedeeyay inuu Aayado Quraan ah u soo xigtay si uu cod bixiyeyaasha ugu marin habaabiyo.
Tobanaan milyan oo dadka reer Indonesia ah ayaa ka qayb qaadanaya doorashooyinka heer gobol ee dalka ka dhacaya.
Cod bixintu waxay bilaabmaysaa 07:00 aroornimo ee wakhtiga dalkaas waxaanay ka dhacaysaa todoba gobol iyo 18 magaalo oo lagu dooranayo hogaamiyeyaasha 76 degmo.
Doorashada Jakarta ka dhacaysa ayaa loo arkaa in ay bilkeedinayso dulqaadka diineed eek a jira Indonesia, oo ah dalka ugu Muslimiinta badan dunida. Qiyaastii 85% bulshada dalkaasi waa Muslimiin laakiin dalku wuxu si rasmi ah u aqoonsanyahay lix diimood.